Khubarada Caafimaadka Oo 14 Talo Sinaya Qof Kasta Oo Bukaan Ah Haddana Soomman Bisha Ramadaan - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Khubarada Caafimaadka Oo 14 Talo Sinaya Qof Kasta Oo Bukaan Ah Haddana...
Waxa jira dad badan oo soonka ku dadaala iyaga oo xaalado caafimaad darro ku sugan, kuwaasi oo u baahan in ay helaan talooyin caafimaad oo la xidhiidha xaaladdooda iyo sida ay ula qabsan karaan soonka si aan dhibaato lahayd. Waxaan qoraalkaan kaga hadlayaa talooyin guud oo ku socota bukaannada damacsan inay soomaan bisha barakaysan ee Ramadaan. Waxaana talooyinkaasi ka mid ah:
1. Iska ilaali cunnooyinka cusbada iyo sokortu ku badan tahay xilliga suxuurta maxaayeelay waxay jidhka ka nuugaan dheecaan-unugeedka, taasi oo keeni karta harraad badan maalintii marka qofku bukaha ahi soomman yahay.
2. Iska ilaali in aad qorraxda ku shaqaysid si aanad u fuuq bixin ama dareeraha jidhkaagu u yaraan, taasina keeni karto dhibaato caafimaad.
3. Ku dadaal in aad cabtid ugu yaraan 8 koob oo biyo ah inta u dhaxayso afurka iyo suxuurta illaa inuu dhakhtarkaagu kuu diido mooyee.
4. Kala tasho dhakhtarkaaga qaadashada iyo wixii laga baddalayo daawooyinka kaadida badiya ee loo yaqaano “Diuretics”.
5. Ka fogow cabista kaffeega iyo qaxwada si aanu qallayl kuugu dhicin. Qaxwaha badan iyo Kafeega waxa la xaqiijiyey in aanay u wanaagsanayn qofka xanuusanaya ee haddana doonaya inuu soomo.
6. Dhakhtarkaaga kala tasho cunnooyinka ay dhici karto inay lid ama Bil-caksi ku noqdaan daawooyinka aad qaadatid.
7. Haddii daawada aad hal mar qaadatid, waxaad ka dhigataa xilliga afurka ama xilliga suxuurta.
8. Haddii daawadu ay tahay laba jeer, waxaad ka dhigtaa xilliga Afurka iyo xilliga Saxuurta.
9. Haddii daawada aad qaadataa sadax ama afar jeer aad qaadanaysid la tasho dhakhtarka inuu kuugu baddalo cabbir aad qaadan kartid laba jeer ama daawo kale oo u dhiganta.
10. Haddii daawo qaadashadu ay kugu adagtahay ama aad hilmaamaysid xilliga soonka, waxaa haboon in aad dhakhtarkaaga kala tashatid si lagu siiyo daawo waqti go’an leh ama kulminaysa daawooyinka kala duwan ee aad qaadatid.
11. Ogow daawooyinka lagu luqluqdo ma jabiyaan soonka maadaama aanad waxba liqaynin.
12. Kiniinada iyo sharoobadu way buriyaan soonka haddii aad qaadato sidaa darteed haddii aad tahay bukaan soomman oo qaata kiniino iyo sharoobo waa in aad habeenkii ka dhigataa.
13. Irbadda iyo dhibicdhibicda dhagaha ama indhaha lagu dhibciyo waa la isku khilaafsan yahay inay jabiyaan soonka ee la tasho culimada ama sheekhaaga.
14. Ogow waa muhiim in aad dhakhtarkaaga ogolaansho caafimaad ka heshaa inta aanad soomin, maadaama uu ka war hayo heerkaaga caafimaad.
Maqalkaasi waxaan ku soo gunaanadaynaa intaasi Waxaa noogu xigi doona Qoraallo aan kaga hadli doono talooyin faahfaahsan oo ku socoto dadka wadnaha ama kelyaha ka buka, dadka qaba cudurka macaanka iyo dhiig-karka, hooyada uurka leh ama ilmaha nuujisa iyo dadka qaba cilladaha uu soonka saameyn ku yeelan karo oo aan dib ka baahin doono.